Madaxwaynaha Falastiiniyiinta oo diiday in xiriirkii Israa'iil uu dib u soo celiyo - BBC News Somali
Madaxwaynaha Falastiiniyiinta oo diiday in xiriirkii Israa'iil uu dib u soo celiyo
Dad muslimiin ah oo ku cibaadaysanaya dibadda misaajidka Al-Aqsaa
Madaxwaynaha falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doono joojintii uu joojiyay xiriirkii uu la lahaa Israa'iil ,iyada oo ay jirto in Israa'il ay meesha ka saartay qalabka wax lagu baaro oo ay horey ugu xirta masaajidka barakysan ee Al- Aqsaa .
Qalabkaasi wax lagu baaro ee ay Israa'iil ku rakibtay albaabka laga galo misaajidka ayaa wax ka dhashay isku dhacyo sababay dhimasho,waxa ayna falastiiniyiinta u arkayeen in ay tahay isku day ay Israa'iil ku doonayso in ay kula wareegto Masaajidka
Xukuuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan ahayd in tillaabadaasi ay qaadaan si ay uga hortagaan in masaajidka hub la soo galiyo.
Waxa ay sidoo kale Israa'iil sheegtay in ay qorshaynayso in qalabka wax lagu baaro ay imika ku badasho tillaabooyiin kale oo ka sahlan oo ammaanka lagu sugayo.
Labada dhinacba falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa waxa ay cadaadis kala kulmayaan beesha caalamka oo doonaysa in la xaliyo muranka hareeyay masaajidka barakaysan ee ay muslimiinta u yaqaanaan Xaramka barakaysan ,Yahuudana ay u yaqaanaan Temple Mount.
Ergayga qaramada midoobe u qaabilsan bariga dhexe ayaa ku baaqay in la dajiyo xiisadda .
Sida ay sheegtay wakaalada wararka ee Reuters waxaa la arkayay shaqaala ka qaadaya masaajidka qalabkii iyo kamarooyiinkii dhawaan lagu rakibay.
Israa'iil ayaa adkaysay tillaabooyiinka ammaanka masaajidka ka dib markii la dilay lab ka mid ciidamadeeda.
Maraykanka ma waxa uu Ruushka kula dagaallami rabaa Ukraine?
Maxaad kala socotaa dalalka ugu awoodda badan bariga dhexe?
Dal Muslim ah oo markii ugu horeysay haweenay ay ka nqoto garsoore Maxkamadda ugu sareysa
39 Daqiiqadood ka hor
Hadal la yaab leh oo ka soo yeeray ninkii wareystay Sadaam Xuseen markii la qabtay
Kumuu ahaa ninkii abaabulay dilka Usaama Bin Laadin madaxweynaha Mareykankana 'bambo ugu xiray diyaaradda'?
Dal saddex sanno oo xabsi ah galinaya ragga 3-da dalaaq ku fura dumarka
Soomaaliya oo sanadkan dalal kale uga kor martay awoodda militariga